ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့ အခါဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် အလွန်သုံးဝင်ပါ တယ်။ ဆံပင်မဖြူအောင် ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ လဲဆိုပါတယ်။ များများစားရင်တော့ အကြောတက် ပါတယ်တဲ့။ ကြက်ဟင်းခါးသီးဆားရေစိမ်ထားတာကို ညှစ်ချပြီး သောက်ရင် ဆီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပါတယ်။ အခုကတော့ ဒီဆေးဘက်ဝင်ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ကြော်ပြီး စားမှာပါ။
ကြက်ဟင်းခါးသီး – ၁ လုံး
ဆနွင်း – ၁/၂ ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ငပိ – ၁/၃ ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ဆား – ၁/၂ ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
၁။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အလျားလိုက်ခွဲ၍ အစေ့ထုတ်ထားလိုက်ပါ။ ဆားနယ်ပြီး မိနစ် (၂၀) ခန့်ထားထားပါ။ ပြီးရင် အခါးရည်ထွက်သွားအောင်ညှစ်ပေးပါ။ တချို့က ခဏပြုတ်လိုက်ပြီးမှ ညှစ်ပါတယ်။ ၄င်းနောက် ပါးပါးလှီးပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူကို မညက်တညက်ထောင်းကာ ဆနွင်းနဲ့ ဆီသတ်ပေးပါ။ကြက်သွန် ကျွတ်လာရင် ကြက်ဟင်းခါးသီးထဲကို ဆား၊ ငပိကို ရေဖျော်ပြီး ထပ်ဆက်လှိမ့်ပေးပါ။ မီးမျှင်မျှင်နဲ့ချက် ပြီး ရေခမ်းလာရင် ချလို့ရပါပြီ။ ကြက်ဟင်းခါးသီးက နာနာကြော်နိုင်လေ အရောင်ပြောင်းလေ စားကောင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အလွန်အဖိုးထိုက်သော ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်တခွက်ရပါပြီ။
The taste of bitter gourd has benefits for health which is also useful for people with Diabetes due to its amazing bitterness. With little side effects as stiffness of the neck if over-eaten, it prevents the mess for grey hair.
If bitter gourd soaked in salt water is squeezed and the liquid produced is generously consumed, you will feel constipation-free andalowered blood sugar level. Now, let me fry this healthy meal of bitter gourd for you.
Bitter Gourd – 1 whole piece
Onion – 1 whole piece
Turmeric Salt – 1/2 ofateaspoon
Pounded Fish (Nga Pi) – 1/3 ofateaspoon After cutting the bitter gourd along its length, you can remove the seeds.
Mix it up withapinch of salt and leave it for at least 20 minutes. Then, squeeze the prepared Bitter gourd to remove all of its bitterness. Some people boil before removing the taste to make it more tender. And then, slice it into thin pieces.
Pound the onion and garlic just enough to lose their shapes and put them into heated oil with turmeric. As soon as they become crispy, put the bitter gourd pieces together withamixture of salt and Ngapi and water.
Curry on with the heat set on justaslight temperature. The good thing about this dish is the more you fry it, the better it’ll taste or smell even.
You can now takeavery healthy and savory dish of bitter gourd !